site na nhazi na 20-07-01
N'oge na-adịbeghị anya, anyị Surgicalwa Ahụ Maka Ahụike na-ere ọkụ. A na-eresị Gowns nke wawa anyị nye ọtụtụ mba na ụwa. Ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ogo ngwaahịa anyị na ọrụ anyị si n'aka ndị ahịa anyị. Sterilisation: Ngwa ndị na-enweghị ike: enwere ike iji ya maka ọrụ ịwa ahụ yana ọgwụgwọ ọrịa.Inspec ...
Na nso nso a, akwa mwepu iche anyị na-ere bụ ire ere. A na-eresị akwa mwepụ iche anyị ọtụtụ mba ụwa. Ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ogo ngwaahịa anyị na ọrụ anyị si n'aka ndị ahịa anyị. Ngwaahịa: Disposable Isolation Gown Style A: Ihe / Ọdịnaya: 100% polypropylene na-abụghị akwa ...
site na nhazi na 20-06-16
N’oge na-adịbeghị anya, uwe ndị anyị na-eji edobe ihe na-ere na-ere ere dị ọkụ. A na-eresị ngwa ahịa nchebe anyị n'ọtụtụ mba dịka UK, Japan, Canada, Malaysia wdg ...
N’oge na-adịbeghị anya, ụdị nkwonkwo anyị a na-eji gbanwere gbanye na-ere ọkụ. Anyị nyefere ndị ahịa ụwa niile. Ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ogo ngwaahịa anyị na ọrụ anyị si n'aka ndị ahịa anyị. Ihe apiri api anyi nwere nke di n'okpuru: 1) mgbochi mmiri, mmanu mmanu, uzuzu uzuzu, iji ihe n'uzo buru ibu.
Igwe nnwale IgM / IgG anyị na-ere ọkụ. Anyị nyefere ndị ahịa ụwa niile. Ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ogo ngwaahịa anyị na ọrụ anyị si n'aka ndị ahịa anyị. Factorylọ ọrụ anyị nwere ikike ọrụ aka siri ike. Ọrịa Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody ule bụ ọsọsọ, qualitati…
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị resịrị ndị ahịa Japan ihe mkpuchi 800,000pcs. Ndị ahịa nwere afọ ojuju maka ogo ngwaahịa na ọrụ anyị. Ọta ihu anyị nwere ihe odide dị n'okpuru ebe a: 1. Ngwaahịa a na-eji PET gosipụtara ọfụma maka ịnọpụ iche na nchedo ihu niile. 2. Ngwa a dị ọkụ na…
Mmiri Proof Hdpe Apron, Gowns chebe ya, Uwe Nchedo, Uwe ọgwụ A na-atụfu, Dust-Proof Pet Face Shield, Mmiri Proof,